CIN Khabar नेपालमा छिर्दै भोकमरी ल्याउने किरा
शोबिता रिसाल आईतबार, जेठ १८, २०७७, ११:४६:००
किराको समुह ४ देखि ८ करोड संख्यामा हुन्छ । एउटा समुह एक बर्गकिलोमिटर ढाकेर उड्छ । अध्ययनका अनुसार त्यो समुहमा ८० लाख किरा हुन्छन ।
काठमाडौं । हेर्दा फट्याङग्रा जस्तै देखिने सलह किरा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सरिरहन्छ । जहाँ पुग्छन्, त्यहाको बाली, नाली र तरकारी सखाप नै पार्छ ।
नेपालमा झण्डै ६० बर्ष पहिले सलह किरा आएको थियो । पर्वतका भद्रकला गिरी सानै हुँदा सलह किरा आएको सम्झिनुहुन्छ । ‘यो किरा पुरै ढाकेर बस्छ जे छ सबै खाइदिन्छ ’ त्यो बेला आएको सलह सम्झिदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो खानै आउने किरा हो यो आउने भने बर्वाद नै हुन्छ । ’
यो किराको समुह ४ देखि ८ करोड संख्यामा हुन्छ । एउटा समुह एक बर्गकिलोमिटर ढाकेर उड्छ । अध्ययनका अनुसार त्यो समुहमा ८० लाख किरा हुन्छन । रातमा थकाई मार्ने र दिनमा सक्रिय रहने यो किराको जहाँ पुग्छ, त्यहाँ केही दिन बस्छ ।
हरिया तरकारी देखि बिरुवा र रुखको बोक्रा सम्म पनि खाने गर्छ । रौतहटका राधा बजगाईलाइ २०११ सालतिर नेपालमा सलह किरा आएको सम्झना छ ।
नेपालमा अहिले अमेरिकन फौजी किरानले मलै बाली नष्ट गर्दा किसान मोकमरी लाग्ला कि भन्ने चिन्तामा छन् । त्यसको नियन्त्रण नसकिदै फेरि अफ्रिकाबाट उत्पति भएको सलह किरा नेपाल आउने जोखिम छ ।
यसपटक पनि ईरानहुँदै पाकिस्तान र भारतसम्म आइपुगेको सलहको ८ देखि १० वटा सक्रिय झुण्ड भारतको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेशसम्म आइसकेको छ । यो १ देखि २ हजार मिटरको उचाईमा उड्ने गर्छ ।
अध्ययन अनुसार यो किराको आयु तीन महिनाको हुन्छ । कोही कोही ५ महिनासम्म बाँचेपनि हरेक तीन महिनामा नयाँ जन्मिने पुरानो मर्ने चक्र चलिरहन्छ ।
हावाको गति पछयाएर प्रतिदिन १ सय ५० किलोमिटर दूरीसम्म यात्रा गर्न सक्ने यो किरा सजिलै नेपाल आउन सक्ने भएकाले बेलैमा सर्तक रहन विज्ञहरुले सरकारलाइ सुझाब दिएका छन् । धानबाली बिशेषज्ञ डा. भोला मान सिह बस्नेत यो किरान नेपाल आयो भने भोकमरी ल्याउने बताउनुहुन्छ । सामान्यतया एउटा सलह किराले आफ्नो वजन बराबरको (करिब २ ग्राम) खाना खान सक्छ ।
अहिले देखिएको सलह ६० वर्ष पहिले देखिएको भन्दा २० गुणा ठूलो भएको भनिएको छ । सरकारले यो किरा नेपाल आउन पनि सक्ने र आयो भने प्रदेश ५ र सुदरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा क्षति पु¥याउन सक्ने अनुमान गर्दैै थप अध्ययनको लागि प्राबिधिक टोली बनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले प्रदेश सरकारलाई तयारी गर्न भनिसकेको र संघीय सरकारले पनि योजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।
यिनका बच्चाहरू १ देखि ३ महिनामा पूर्ण वयस्क बन्दछन् । अध्ययन अनुसार यो किराको आयु तीन महिनाको हुन्छ । कोही कोही ५ महिनासम्म बाँचेपनि हरेक तीन महिनामा नयाँ जन्मिने पुरानो मर्ने चक्र चलिरहन्छ ।
सलह धेरै संख्यामा र ठूलो क्षेत्रलाई ढाकेर बस्ने र हिँड्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वमै चुुनौती बनेको छ । एक हाँसले दिनमा २ सय सलह खाने भएकाले चीनले केहीदिनअघि सलहसँग लडन पाकिस्तानलाई एक लाख हाँस पठाएको थियो । २०२० को फेब्रुअरीमा सलह प्रकोपको कारणको पाकिस्तानमा राष्ट्रव्यापी सङ्कटकालको घोषणा गरियो।
संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत मानवको खाद्यान्नमा सलहको असर देखिन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, जेठ १८, २०७७, ११:४६:००